ဆေးဖိုးငွေ (၂) သိန်း ထောက်ပံ့သွားတယ်ပြောလို့ မတွေ့တာကြာလို့ လာတွေ့တာပါ ဆိုတဲ့ ယုန်လေး - Zeekwat Hot News
ဆေးဖိုးငွေ (၂) သိန်း ထောက်ပံ့သွားတယ်ပြောလို့ မတွေ့တာကြာလို့ လာတွေ့တာပါ ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
July 24, 20190417
မြန်မာ့အငြိမ့်လောကရဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးဧရာဆီက သူ့ဆီကို ယုန်လေးက လာတွေ့ရင်း ဆေးဖိုးငွေ (၂) သိန်း ထောက်ပံ့သွားလို့ ကျေးဇူးတင်နေမိပြီး ဆုတောင်းစကားများ ပြောပေးခဲ့ပါတယ်။
Photo : ဧရာ
ဦးဧရာက “အဆိုတော် တေးရေးဆရာ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ (ရှည်လိုက်တာ😁) ယုံလေးက ဆေးဘိုးငွေ၂၀၀၀၀၀/ နှစ်သိန်းထောက်ပံသွားလေရဲ့ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ယုံလေးရေ အနုပညာလောကမှာဒိထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြား ပါစေဗျာ🙏” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာထက်မှာပါ ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
Photo : Yone Lay
ယုန်လေးက ဦးဧရာရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားကြောင့် ထောင်ပံ့တာ မဟုတ်ဘဲ မတွေ့တာကြာလို့ လာတွေ့တာပါလို့ ညီအစ်ကိုအရင်းတစ်ဦးလို ပြန်လည်ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ထောက်ပံ့တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ . လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအကြာကြီးထဲက အတူတူမဟုတ်တာတွေရော ဟုတ်တာတွေရော လုပ်ခဲ့ကျတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ မတွေ့တာကြာလို့လာတွေ့တာပါ 😍😍😍” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဦးဧရာက ဟာသအရမ်းပြောတတ်တဲ့ လူရွှင်တော်ကြီးဖြစ်လို့ ကလေးလူကြီးအားလုံးချစ်ခင်လေးစားကြပြီး အသက်အရွယ်အရ နားမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ အနုပညာလောကမှာပဲ အနားယူထားခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ယုန်လေးက အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အလွန်ကောင်းတဲ့ သူဖြစ်သလို ကူညီရိုင်းပင်းတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ … ဦးဧရာနဲ့ ယုန်လေးတို့နှစ်ဦးရဲ့ ရင်းနှီးမှု၊ စာနာတတ်မှုများက မြင်ရသူတိုင်းက စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးအတွက် အားပေးစကားများကိုလည်း မှတ်ချက်မှာ ရေးသားခဲ့ပါဦးနော်။
Source : Yone Lay Fb
မွနျမာ့အငွိမျ့လောကရဲ့ လူရှငျတျောကွီး ဦးဧရာဆီက သူ့ဆီကို ယုနျလေးက လာတှရေ့ငျး ဆေးဖိုးငှေ (၂) သိနျး ထောကျပံ့သှားလို့ ကြေးဇူးတငျနမေိပွီး ဆုတောငျးစကားမြား ပွောပေးခဲ့ပါတယျ။
ဦးဧရာက “အဆိုတျော တေးရေးဆရာ သရုပျဆောငျ ဒါရိုကျတာ (ရှညျလိုကျတာ😁) ယုံလေးက ဆေးဘိုးငှေ၂၀၀၀၀၀/ နှဈသိနျးထောကျပံသှားလရေဲ့ ကြေးဇူးကမ်ဘာပါ ယုံလေးရေ အနုပညာလောကမှာဒိထကျမက အောငျမွငျကြျောကွား ပါစဗြော🙏” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာထကျမှာပါ ကြေးဇူးတငျစကားဆိုခဲ့ပါတယျ။
ယုနျလေးက ဦးဧရာရဲ့ ကြေးဇူးတငျစကားကွောငျ့ ထောငျပံ့တာ မဟုတျဘဲ မတှတေ့ာကွာလို့ လာတှတေ့ာပါလို့ ညီအဈကိုအရငျးတဈဦးလို ပွနျလညျပွောခဲ့ပါတယျ။
“ထောကျပံ့တယျတော့ မဟုတျပါဘူးဗြာ . လှနျခဲ့တဲ့ နှဈတှအေကွာကွီးထဲက အတူတူမဟုတျတာတှရေော ဟုတျတာတှရေော လုပျခဲ့ကတြဲ့ ညီအဈကိုတှေ မတှတေ့ာကွာလို့လာတှတေ့ာပါ 😍😍😍” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဦးဧရာက ဟာသအရမျးပွောတတျတဲ့ လူရှငျတျောကွီးဖွဈလို့ ကလေးလူကွီးအားလုံးခဈြခငျလေးစားကွပွီး အသကျအရှယျအရ နားမကနျြးဖွဈတဲ့အခါမှာတော့ အနုပညာလောကမှာပဲ အနားယူထားခဲ့ပါတယျ။ အနုပညာနယျပယျအသီးသီးမှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ ယုနျလေးက အနုပညာရှငျညီအဈကိုမောငျနှမမြားနဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး အလှနျကောငျးတဲ့ သူဖွဈသလို ကူညီရိုငျးပငျးတတျတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
စာဖတျပရိသတျကွီးရေ … ဦးဧရာနဲ့ ယုနျလေးတို့နှဈဦးရဲ့ ရငျးနှီးမှု၊ စာနာတတျမှုမြားက မွငျရသူတိုငျးက စိတျခမျြးသာစပေါတယျ။ သူတို့နှဈဦးအတှကျ အားပေးစကားမြားကိုလညျး မှတျခကျြမှာ ရေးသားခဲ့ပါဦးနျော။
အရမ်းလှတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကို အနီးကပ်ပြလိုက်တဲ့ ခရစ္စတီးနား